Vaovao - Famerenana amin'ny laoniny ny fonosana mora azo
Ny vokatra fonosana azo ovaina dia manondro ny fampiasana fitaovana malefaka toy ny sarimihetsika plastika avo làlana na foil vy ary ny sarimihetsika mitambatra mba hanamboarana kitapo na endrika kaontenera hafa. Ho an'ny aseptika ara-barotra, fonosana azo amboarina amin'ny hafanan'ny efitrano. Ny fitsipiky ny fanodinana sy ny fomba kanto dia mitovy amin'ny kapoaka vy amin'ny fitehirizana sakafo. Ny kaontenera fonosana mahazatra dia misy kaopy plastika sy tavoahangy plastika. Kitapo fandrahoana, boaty sns.
Satria ny fahasamihafana tsindry azo avela amin'ny famonosana malefaka dia kely indrindra, ny tsindry ao anaty kaontenera mandritra ny fizotran'ny fanamorana dia tena mora mipoitra aorian'ny fiakaran'ny maripana. Ny mampiavaka ny kitapo fandrahoana azy dia ny tahotra ny fiakarany fa tsy ny tsindry; ary ny kaopy sy tavoahangy plastika dia samy matahotra ny fiakarana sy ny tsindry, noho izany ilaina ny fampiasana ny fizotran'ny fanamafisana ny tsindry amin'ny fanamainana. Ity dingana ity dia mamaritra fa ny mari-pana sterilization sy ny tsindry fanoto dia mila fehezina mitokana amin'ny famokarana fonosana malefaka Ny fitaovana fanamorana, toy ny karazan-drano (karazana fandroana rano), karazan-tsifotra rano (famafazana ambony, famafazana sisin-tany, famafazana feno), etona sy rivotra mifangaro karazana sterilization, matetika nametraka masontsivana isan-karazany amin'ny PLC ho an'ny fanaraha-maso mandeha ho azy.
Tokony hohamafisina fa ny singa efatra amin'ny metaly dia afaka manatsara ny fifehezana ny fizotran'ny dingana (mari-pana voalohany, ny maripana fanamorana, ny fotoana, ny singa fototra) dia azo ampiharina amin'ny fifehezana ny fanamorana ny sakafo fonosana malefaka ihany koa, ary ny tsindry mandritra ny fizotran'ny fanamorana sy ny fampangatsiahana dia tsy maintsy voafehy tsara.
Ny orinasa sasany dia mampiasa sterilization etona ho an'ny fanamorana sterilization. Mba hisorohana ny vaky kitapo fandrahoana azy dia asio rivotra voafatotra fotsiny ao anaty vilany fanamafisana ny setroka mba hampisy fientanentanana miverina amin'ny kitapo fonosana. Fomba fanao tsy ara-tsiansa izany. Satria ny fanafoanana ny etona dia tanterahina ao anatin'ny etona madio, raha misy rivotra ao anaty vilany dia hisy kitapo rivotra ary io rivotra io dia handeha ao anaty vilany fanamasinana mba hananganana faritra mangatsiaka na toerana mangatsiaka, izay mahatonga ny hafanan'ny sterilization tsy mitovy, ka miteraka sterilization tsy ampy amin'ny vokatra sasany. Raha tsy maintsy mampiditra rivotra voafehy ianao dia mila manana mpankafy matanjaka, ary ny herin'ity mpankafy ity dia noforonina tsara mba hamela ny rivotra voafintina hiparitaka amin'ny alàlan'ny fanaka mahery vaika avy hatrany aorian'ny fidirana ao anaty vilany. Ny rivotra sy ny etona mikoriana mifangaro, Mba hahazoana antoka fa ny mari-pana ao amin'ny vilany sterilisation dia mitovy, mba hiantohana ny vokatra sterilization vokatra.